မြန်မာ့လျှော်ကို တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် သင်တန်းများကို ယခင်နှစ်များ? - Yangon Media Group
မြန်မာ့လျှော်ကို တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များ ထုတ်လုပ်နိုင်ရန် သင်တန်းများကို ယခင်နှစ်များ?
ပဲခူး၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆
မြန်မာလျှော်မှ တန်ဖိုးမြှင့်လက်မှုပစ္စည်း ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်သင်တန်းများကို လျှော်စိုက်ဧရိယာ အများဆုံးဖြစ်သော ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ဝါနှင့် လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနပိုင် ဂုန်လျှော်ခြံများသို့ ကွင်းဆင်း၍ ပို့ချ ပေးနေကြောင်း သိရသည်။
မြန်မာ့လျှော်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ တိုးတက်လာစေရေးအတွက်ရည်ရွယ်ကာ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲမှ ဦးဆောင်၍ လျှော်လက်မှုပစ္စည်းတန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်သည့်သင်တန်းများကို ဖွင့်လှစ်ပေးနေရာ ယခင်နှစ်များကနှင့်မတူဘဲ တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ခရိုင်များရှိ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းများအပြင် မြို့နယ်များရှိ ဂုန်လျှော်ခြံများတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းများပါ သင်ယူနိုင်စေရန် ခြံအရောက်သင်ကြားပို့ချ ပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ ”ခါတိုင်းက တိုင်းနဲ့ခရိုင်တွေပဲဖွင့်တာ။ ဒီနှစ်ထူးခြားတာက ဂုန်လျှော်သုတေသနခြံတွေ၊ ဂုန်လျှော်မျိုးစေ့ထုတ်တဲ့ခြံတွေမှာရှိတဲ့ စိုက်ပျိုးရေးဝန်ထမ်းတွေကိုပါတိုးချဲ့ပို့ချပါတယ်။ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးမှာဆို ရေတာရှည်မြို့နယ်က စည်ပင်အေးဂုန်လျှော်ခြံနဲ့ အုတ်တွင်းမြို့ နယ်၊ ဇီးဖြူသောင်ခြံတွေမှ စိုက်ပျိုးရေးက ဝန်ထမ်းတွေကို ပို့ချခဲ့ပါတယ်”ဟု ပဲခူးခရိုင်စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန ဦးစီးအရာရှိ ဒေါ်မေကြည် မြက ပြောကြားသည်။
လျှော်ကြမ်းတစ်ပိဿာလျှင် ကျပ် ၇ဝဝ ဈေးနှုန်းရရှိပြီး အဆိုပါ လျှော်ကြမ်းကို လက်မှုပစ္စည်းအဖြစ် တန်ဖိုးမြှင့်ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါက ငွေကျပ် ၁ဝဝဝဝ ကျော်အထိ ဝင်ငွေတိုးတက်ရရှိနိုင်သဖြင့် ကျေးလက်နေ တောင်သူမိသားစုဝင်များ၏ တစ်ဦးချင်းဝင်ငွေများတိုး တက်လာနိုင်သောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ သင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးနေ ခြင်းဖြစ်သည်။ ”လျှော်နဲ့ပြုလုပ်တဲ့လက်မှုပစ္စည်းတွေဟာ နိုင်ငံတကာပြပွဲတွေမှာ လူကြိုက်များပါတယ်။ အရင်က တောင်သူတွေဆီက လျှော်ဝယ် ယူတာ၊ ထုတ်လုပ်ရောင်းချတာတွေကို နိုင်ငံတော်က တိုက်ရိုက်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကြောင့် ပုဂ္ဂလိကထံစက်ရုံတွေ လွှဲပြောင်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာ လျှော်သီးနှံပျောက်ကွယ်မယ့်အန္တရာယ်နဲ့အလွန်နီးကပ်နေပါတယ်။ ဂုန်လျှော်၊ ချဉ်ပေါင်လျှော်စိုက်ပျိုးမှုနဲ့ လျှော်သီးနှံစိုက်ပျိုးရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာစေဖို့ကို တစ်ဖက်တစ်လမ်းက အထောက်အကူဖြစ်စေဖို့ ရည်ရွယ်ပို့ချရတာပါ”ဟု ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက် သီးနှံဌာနခွဲမှ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးအောင်မော်ကပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပီနံအိတ်များ အစားထိုးဝင်ရောက်လာမှုကြောင့် ၂ဝဝ၁-၂ဝဝ၂ ခုနှစ်မှစတင်၍ ဂုန်နီအိတ်ဈေးကွက်ပျောက်ခဲ့ကြောင်း ဝါနှင့်လျှော်မျှင်ထွက်သီးနှံဌာနခွဲမှ သိရသည်။
ဘိုးဘွား ရိပ်သာများတွင် လှူဒါန်းခြင်း၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ရွေ့လျား စာကြည့်တိုက်များ ထားရှိ
မြဝတီမြို့နယ်တွင် မူးယစ်ဆေးဝါးများ အပြင် သေနတ်နှစ်လက်၊ ကျည်များနှင့်အတူ မော်တော်ယာဉ်တစ်စ
အင်းလျား ကန်ပေါင်တွင် ကြွက်ရှင်းလင်းရေး လွှတ်တော်၌မေး မြို့တော်ဝန်၏ အဖြေ အားရကျေနပ်မှု မရှိ??
ရာဇမဏိ စူဠာကောင်းမှုတော်စေတီကြီးတွင် ကပ်လှူရန်ကျန်နေသည့် ဆေးဖြူသင်္ကန်းနှစ်ထပ်ကပ်လှူမှု လုပ?
နိုဝင်ဘာ လဆန်းမှ စတင်၍ အိန္ဒိယမှ ကွမ်းသီးဝယ်ယူမှု ရပ်ဆိုင်းထားသောကြောင့် ကွမ်းသီးကုန်သည်မျာ
ထိုင်းသရက်သီးနှင့် ခရမ်းချဉ်သီးများ မြဝတီနယ်စပ်မှ တစ်ဆင့် ပြည်တွင်းသို့ စတင် ဝင်ရောက်လာ